Kate Hudson dia niteraka zazavavy kely - News
Marika Momba Ny Herinaratra Vehivavy Mpinamana Sy Fianakaviana Fahasalamana Ara-Tsaina Fanafody An-Trano Mpahay Nahatratra Fironana Diy Ao Amin'ny The News Fanamarihana Momba Ny Sarimihetsika Products
Kate Hudson dia mandray zazavavy kely ary manana dikany manokana ny anarany
Ofisialy io: nitombo iray monja ny fianakavian'i Hudson-Fujikawa.
Androany, nanambara i Kate Hudson fa izy sy ny sakaizany, gitarista Danny Fujikawa, dia niarahaba ny zanak'izy ireo voalohany, zazavavy kely antsoina hoe Rani Rose Hudson Fujikawa. Nizara sary tao amin'ny Instagram ilay mpilalao sarimihetsika mampiseho ny tsingerintaona nahaterahan'ilay zaza vao teraka (2 Oktobra) ary nanoratra hoe, Eto izy.
Lahatsoratra iray nozarain'i Kate Hudson (@katehudson) amin'ny 3 Oktobra 2018 amin'ny 1:28 hariva PDT
Ao amin'ny sary mihetsika, Hudson dia nanambara fa nantsoiny hoe Rani taorian'ny raibeny, Ron Fujikawa. Ron no lehilahy niavaka indrindra izay halahelo mafy antsika. Voninahitra ny manome anarana azy araka ny anarany.
Tsy isalasalana fa dadabe sy rehareha izy.
Mifandraika: Jereo ny zanakalahin'i Kate Hudson very hevitra noho ny fanomezana tamin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Sokajy Celeb Style Pets Diy
hevitra momba ny makiazy mora foana
Boribory somary lavalava volo tapaka nandritra ny tarehy
lisitry ny sarimihetsika korean
fampihetseham-batana hamoizana tavy ho an'ny vehivavy
hihety volo tsara indrindra ho an'ny ankizivavy